“खनिजकै कारण नेपालीको आय अमेरिकीहरूकोभन्दा बढी हुन्छ”- थइन्द्र रिजाल – Nepal Japan
नेपाली समय : 10:16:48
जापानी समय : 01:31:48
“खनिजकै कारण नेपालीको आय अमेरिकीहरूकोभन्दा बढी हुन्छ”- थइन्द्र रिजाल
26 April, 2019 14:50 | अन्तरवार्ता | comments | 360150 Views
थइन्द्र रिजाल एक व्यक्ति भए पनि उहाँको व्यक्तित्व अनेक छन् । सामाजिक कार्यका साथै खनिज व्यवसायमा संलग्न उहाँले सामाजिक अभियानका क्रममा युरोप, अफ्रिका, अमेरिका र एशियाका करिब ५२ वटा मुलुकमा आफ्ना अनुभव वहाँले बाँडिसक्नु भएको छ र उहाँले एउटा सपना देख्नुभएको छ नेपालको खनिज पदार्थबाटै नेपालीको आय अमेरिकीभन्दा बढी पुर्याउने ।
जापानमा वर्षेनी आयोजना हुने हिरोसिमा–नागासाकी मेमोरियल कन्भेन्सनमा जापानका प्रधानमन्त्रीसँगै सहभागिता जनाउँदै आउनु भएको छ ।
रिजाल हाल जिपी कोइराला फाउन्डेसन फर डेमोक्रेसी पिस एण्ड डेभलपमेन्टका सिन्धुपाल्चोक जिल्ला संयोजक, वल्र्ड डेमोक्रेटिक काउन्सिलका स्थायी सदस्य, विश्व हिन्दू परिषद् (विश्व परिषद्)का स्थायी सदस्य, नेपालको खनिज (माइनिङ) व्यवसायका अग्रणी समाजवादी व्यक्तित्व रिजालसँग नेपाल–जापान डट कमका लागि समसामयिक विषयमा सूर्यप्रसाद कोइरालाले गरेको कुराकानी प्रस्तुत छ ।
० यति लामो पृष्ठभूमि छ तपाईको ? छोटकरीमा परिचय दिनुस न ?
मेरो राजनीतिक जीवन नेपाल विद्यार्थी संघबाट सुरू भयो । त्यसै सिलसिलामा २०३६ सालमा पाकिस्तानमा जुल्फीकर अलि भुट्टो (बेनजिर भुट्टोको बुवा) लाई फाँसीको सजाय दिइएको थियो । त्यसै प्रसंगमा हामी विद्यार्थीहरू पाकिस्तानी राजदुतावास घेर्न गएका थियौं । जसमध्ये बलबहादुर के.सी., शरणविक्रम मल्ल र कैलाश कार्की लगायतको नेतृत्वमा हामी त्यहाँ गएका थियौं । यसरी सुरू भयो मेरो राजनीतिक जीवन ।
समयक्रममा नेपाली कांग्रेसले आफ्नो जनमत कस्तो छ भनेर बुझ्न पञ्चायतलाई उपयोग गर्ने तर पञ्चायती व्यवस्थालाई कदापी स्वीकार नगर्ने भन्ने विषयमा लाजिम्पाटस्थित शंकर होटलमा एउटा बैठक बस्यो । सोही अनुरूप आफ्ना सफेद युवाहरूलाई परीक्षणका लागि उपयोग गरियो । जसअनुरूप म लगायत १९ जना उम्मेदवार भयौं, सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा । तर म मात्र गाउँपञ्चायतमा निर्वाचित भएँ । अरू साथीहरू थोरै थोरै मतले पराजित भए । यसरी मेरो राजनीतिक यात्रा सुरू भएको हो ।
० त्यसपछि राजनीतिसंगै धार्मिक, सामाजिक कार्यमा तल्लिन हुनुभयो त, तपाईं ?
त्यसपछि म साँच्चिकै धार्मिक र सामाजिक कार्यमा व्यस्त भएँ । पार्टी राजनीतिमा त्यति सक्रिय भइन् । तर ख्याल राख्नुपर्ने एउटा महत्वपूर्ण कुरा के हो भने कांग्रेस पार्टीको लागि करिब १७ हजार सदस्यता मेरै हातबाट वितरण भएको छ सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा ।
० पछिल्लो समय तपाईं नेपालमा खनिज व्यवसायमा संलग्न हुनुभएको पाइन्छ । यसले राष्ट्रलाई के योगदान पुग्ला ?
त्यसो मात्र होइन, म सामाजिक र धार्मिक कार्यका अलावा खनिज (माइनिङ)को क्षेत्रमा संलग्न भएँ । त्यसै बीचमा म सानो दुर्घटनामा परें । मेरो गोडामा स्टिलको पाता नै राख्नु पर्ने स्थिति आयो । त्यसबेला मलाई मानिसहरूले अब यो अपाङ्ग भयो, यसले अरू केही काम गर्न सक्दैन भन्ने सुनें । त्यसपछि मैले विश्वका विभिन्न राजनेताहरूका बायोग्राफी पढें । जसमा उद्योगसँग सम्बन्धित मानिसहरूका विशेष गरी अपाङ्गहरूका बायोग्राफीलाई मैले ध्यानपूर्वक पढें ।
जसमा बेलायतका खनिज उद्यमी डा.मार्टिन र अमेरिकाका पूर्वराष्ट्रपति फ्रायांक्लिन रूजवेल्टको जीवनले मलाई प्रभावित तुल्यायो । यता आपूm सबलाङ्ग हुन्छु कि हुन्न भन्ने द्विविधाका बीच वि.पि.कोइरालाले भनेको ‘मानिस ब्रेडले होइन, ब्रेनले बाँच्छ’ भन्ने कुरा पनि मनमा थियो । यस बीचमा मैले आफूलाई जुरूक्क उठाएर आफ्नो देशको प्राकृतिक बरदानलाई विश्व सामु किन नचिनाउने भन्ने कुरा मनमा आयो । सोही अनुरूप म नेपालको खनिज उत्खनन्का क्षेत्रमा संलग्न भएँ र विश्वका १८ वटा देशमा यसकै लागि भ्रमण पनि गरें । यसमै व्यस्त भएँ ।
० तपाईंको व्यवसायले राज्यलाई के फाइदा पुग्छ र ?
म अर्को तरिकाबाट पनि पैसा कमाउन सक्थें । ढुङ्गा, माटो समाउनु पर्ने थिएन । म राज्यलाई तिरो अर्थात् कर तिरेर देशको खनिजलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने मामिलामा जुटें । तपाईं एउटा कुरा ख्याल राख्नुस्, नेपालका ३–४ वटा पहाडलाई भत्काएर नेपाली खनिज पदार्थ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा लग्न सकियो भने नेपालीहरूको प्रतिव्यक्ति आय अमेरिकीहरूको भन्दा कम हुँदैन । म ठोकुवा गरेर भन्छु । अब बुझ्नुस्, मैले उठान गरेको कामले राज्यलाई के फाइदा हुन्छ ? उत्तर यसैमा निहित छ । यस्तो काम गर्दा राज्यलाई लाभ पुग्छ र मैले थोरै लाभ प्राप्त गरें भने पनि यो मेरो लागि त्यागकै कुरा हो ।
० तपाईं अहिले गिरिजाप्रसाद कोइराला फाउन्डेशन सिन्धुपाल्चोकको संयोजक हुनुभयो, के छ भावी योजना ?
म वल्र्ड डेमोक्रेटिक काउन्सिलको स्थायी सदस्य, विश्व हिन्दू परिषद्को (विश्व परिषद्) पनि स्थायी सदस्य हुँ । म केही समय सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको राजनीतिमा निस्कृय जस्तो देखिए पनि भित्रभित्र मैले आफ्नो चेतनाले भ्याएसम्म काम गरिरहेकै थिएँ । यसै बीच म कोअपरेसन नेटवर्क नेपाल (सिएनएन) को संस्थापक पनि छु । यस अर्थमा म आफूलाई कुनै न कुनै रूपमा प्रजातान्त्रिक समाजवादी अभियानमा संलग्न भइरहेकै थिएँ । बीचमा मलाई नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका अथक योद्धा अर्थात् शान्ति र क्रान्तिका महानायक गिरिजाप्रसाद कोइरालाको स्मृतिमा स्थापना भएको गिरिजाप्रसाद कोइराला फाउन्डेसन सिन्धुपाल्चोकको जिल्ला संयोजकको रूपमा छानिन पाउँदा गौरवको अनुभूति गरेको छु ।
यतिबेला कांग्रेसको वैचारिक धरातल कमजोर भएको अवस्था छ । यसलाई नैतिक रूपमा कसरी अगाडि बढाउने भन्नेमा म लगायत साथीहरू चिन्तनशील छौं । साँच्चै भन्ने हो भने नेपालको प्रजातान्त्रिक इतिहासमै नेपाली कांग्रेस कमजोर जस्तो देखिएका बेला मेरो सानै भए पनि योगदान रहोस् र नेपाली कांग्रेस मजवुत भएर अगाडि बढोस् भन्नका खातिर गिरिजाप्रसाद कोइराला फाउन्डेसन मार्पmत केही योगदान पुर्याउने मेरो चाहना छ ।
० कांग्रेस पार्टीलाई एक नम्बरमा ल्याउन के–कस्ता योजना अगाडि लग्नु पर्छ भन्ने लाग्छ ?
आम आनिसको बुझाई नेपाली कांग्रेस ‘मासवेस’ राजनीतिक पार्टी हो भन्ने छ । तर मेरो बुझाई यसमा अलिक फरक छ । किनभने आफ्नो अनुशासनसहित ‘क्याडर’ प्लस ‘मासवेस’ पार्टीका रूपमा नेपाली कांग्रेसलाई अगाडि बढाउन सकियो भने सिन्धुपाल्चोकमा हामी एक नम्बरको पार्टी हुने कुरामा दुईमत छैन । यसलाई देशैभर पैmसलाउन सकियो भने त झनै उत्तम हुन्छ ।
० गिरिजाप्रसाद कोइराला फाउन्डेसनको सञ्जाल जिल्लाव्यापी बनाउनु भयो छिट्टै, के फाउन्डेसनमार्फत प्रत्यक्ष राजनीतिमा आउन खोज्नु भएको हो भन्ने पनि हल्ला छ, यथार्थ चाहिँ के हो ?
मेरो पहिलो उद्देश्य भनेकै जिल्लामा नेपाली कांग्रेसलाई एक नम्बरको पार्टी बनाउने भन्ने हो । सके देशैभर यो अभियान कामयावी होस । मेरो अहिले मूल ध्येय भनेकै कमजोर अवस्थामा रहेको पार्टीलाई कसरी बलियो बनाउने भन्ने नै हो । त्यसै मार्फत प्रत्यक्ष राजनीतिमा आउने भन्ने जुन हल्ला छ त्यो हल्ला मात्रै हो । यतातर्पm मैले केही सोचेकै छैन ।